Ibhizinisi, Amathuba eBhizinisi
Ukwandisa impumelelo yebhizinisi lakho siqu, isisekelo samakhasimende kufanele ngaso sonke isikhathi sisondele. Kungaba incwadi yokubhala noma i-notebook, mhlawumbe uhlu ohlwini lwencwadi, noma yini, kodwa into esemqoka ukukuba nayo noma ngabe ukuphi, noma ngabe uhlala ogwini. Kudingeka sisebenze njalo kulolu hlu, qinisekisa ukuthi amakhasimende angaya emncintiswaneni, ngezikhathi ezithile ubazise ngemisebenzi ewusizo, ngokuvamile, yenza konke ukuze abantu bangakhohlwa ngawe futhi bafuna ukusebenzisana nawe ngokuqhubekayo.
Kubaluleke kakhulu ukuthi ikhasimende lenziwe ngendlela ehlelekile, okungukuthi:
- Iqoqo ulwazi olutholakali, luhlaziye, futhi lwenza izinqumo zebhizinisi ezilungile.
- Kwakukhona uhlelo olukhethekile "Database of amaklayenti" kwi medium computer. Kulula ukuyisebenzisa futhi ewusizo kakhulu.
Kulungile, lapho ikhasimende lifakwa ohlelweni olukhethekile lwe-Exel, olubukeka ngokushesha ngesimo setafula ngezici ezengeziwe. Lolu hlelo lukhululekile, futhi imininingwane yamakhasimende ingabuyekezwa njalo ngenxa yenani elingapheli lamakholomu nemigqa. Uhlelo lwe-Exel kulula ukuyisebenzisa futhi aludingi amakhono athile.
Uhlelo lokuqoqa isisekelo samakhasimende lulula. Umehluko uzobe nje uhlobo oluthile lomsebenzi, futhi isimiso sizohlala sinye. Uma sicacisa isibonelo sebhizinisi elikhulu nelolukhulu njengezohwebo ezakhiweni zokwakha, khona-ke udinga ukuxhumana nazo zonke izinkampani ezithintekayo ekwakheni izinto ezihlukahlukene. Ulwazi olunjalo luyatholakala kwi-intanethi, amaphephandaba ahlukahlukene kanye nezinhlangano ezikhethekile zokuthengisa ezinesizinda sabo siqu sezinhlangano ezidingekile. Lapha insimu yomsebenzi ayikhawulelwe kunoma yini, noma yiyo yonke ikholi yendawo yokwakha.
Uma sikhuluma ngokukhangisa kwenethiwekhi, khona-ke kulokhu Isisekelo sekhasimende Egcwele ucwaningo, izinhlangano ezidlulayo, izindlu zokuhlala nokunye okunjalo. Ungagonsa kuzo zonke izicabha.
Uma uhlu oluthile lwamaklayenti lukulungele, abantu badinga ukushayela futhi bazise njengesikhashana ngangokunokwenzeka, kungcono ukuthi ungadluli ngolwazi. Kuzoba usizo ukuba, ngaphezu kwenombolo yocingo, i-e-mail yekhasimende ukuba ilahle imininingwane edingekayo njalo.
Kufanele kuqondwe ukuthi amanye amakhasimende, ngisho nokuhlala unomphela, angaqedwa ngenxa yezizathu eziningi, yingakho udinga ukubuka njalo ezintsha futhi uzibeke esisekelweni sakho. Uma ibhizinisi lakho lihlanganisa izilaleli eziningi, kunconywa ukuqasha abantu abaningana ukwakha isisekelo seklayenti ngamakholi wefoni nokuqoqa ulwazi kwi-inthanethi. Ngakho, ungagcina isikhathi esiningi.
Indlela yokuthola iklayenti ngayinye ibalulekile , ukuze umuntu azi njalo ukuthi uyakhumbula ngaye, wazizwa ebaluleke kakhulu. Eduze iklayenti ngalinye, ungenza amanothi ahlukahlukene ngencazelo yamaphuzu abalulekile aphathelene nomuntu othile. Idatha ngolwazi lwamakhasimende iyithuluzi elibaluleke kakhulu futhi elibalulekile lokuqhuba ibhizinisi eliphumelelayo, ligcine ngokucophelela!
Sebenza ekhaya - umhlangano wamapenki. Ukubuyekeza akushiye ngokungangabazeki ukuthi lokhu kungukukhwabanisa
Rhode Island - inkukhu zohlobo: incazelo, izithombe, izincazelo, ukubuyekezwa
"Ford Focus 1" (American, 2l, okuzenzakalelayo): injini, Ukucaciswa, ukubuyekezwa nabanikazi, isithombe
Tank Storage amanzi: indlela yokufaka?
Ubuhle Edene - Adamu no-Eva Ihhotela, Turkey